LED အလင်း Silicon လက်ကောက်, RFID အဝေးမှထိန်းချုပ်သည့် LED အလင်း Silicon လက်ပတ်, voice-activated နဲ့ LED အလင်း Silicon လက်ကောက်
voice-activated နဲ့ LED အလင်း Silicon လက်ကောက်, RFID အဝေးမှထိန်းချုပ်သည့် LED အလင်း Silicon လက်ပတ်, LED အလင်း Silicon လက်ကောက်
လက်ပတ် / လက်ကောက် LED အလင်း Silicon လက်ကောက်, Remote Controlled LED Light Silicone Bracelet, RFID Remote Controlled LED Light Soft Silicone Wristband, voice-activated နဲ့ LED အလင်း Silicon လက်ကောက်, Voice-activated LED Light Silicone Wristband
The RFID chip can be packaged, and any color can be selected, and the surface can be screen printed or laser engraved LOGO, ပုံစံ, continuous coding and other personalized design solutions.
ပစ္စည်း: soft silicon
custom အပြောင်းအလဲနဲ့: ဟုတ်ကဲ့
စွမ်းအား: 2CR2032 button ကိုဘက်ထရီ×, စဉ်ဆက်မပြတ်ဘို့ lit နိုင်ပါသည် 10 နာရီ, ဘက်ထရီနဲ့အစားထိုးနိုင်ပါတယ်.
အထုပ် RFID ချစ်ပ်: EM4100, TK4100, Mifare IC S50, FM11RF08, NTAG216, ဂြိုလ်သား h3, စသည်တို့ကို, သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: 10စင်တီမီတာ (ကွဲပြားခြားနားသောချစ်ပ်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစာဖတ်ခြင်းအကွာအဝေး)
Read နှင့်အချိန်ကိုရေး: 1ဒေါ်
The RFID bracelet is an environmentally-friendly light-emitting soft silicone bracelet, which is non-toxic, tasteless and has no side effects on the human body. The wristband is designed to be flexible, non-cracking, long-lasting, non-irritating to the skin, soft in texture, generous in appearance, simple in appearance, bright in color, popular with domestic and foreign customers, and fashionable fashion products. There areavariety of different sizes and different vivid colors to choose from, and can also be processed according to the customer's model or drawings to create intaglio, ဖောင်းကြွ, luminous, fluorescent, and mixed colors. Any LOGO pattern can be customized according to customer requirements and matched with beautiful packaging.
It is used in various entertainment venues, ဖျော်ဖြေပွဲ, KTV, party, bar clubs, tourist attractions, swimming places, amusement park tickets, and isacheering prop for various large-scale parties, sports events, festive carnivals, birthday parties and other entertainment occasions.
I am interested in your product Voice-activated LED Light Silicone Bracelet, RFID အဝေးမှထိန်းချုပ်သည့် LED အလင်း Silicon လက်ပတ်, LED အလင်း Silicon လက်ကောက်
prev: RFID dual-အကြိမ်ရေလက်ပတ်, LF + HF dual-အကြိမ်ရေလက်ပတ်, HF + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF dual-band ကိုလက်ပတ်
နောက်တစ်ခု: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Long ကအဝေးသင်7မီတာ Silicon လက်ပတ်, long ကအဝေးသင်7မီတာလှိုင်းနှုန်းသည် UHF ပါးရိုက်လက်ပတ်
NFC ကိုပျော့ဆီလီကွန်လက်ပတ်, NFC ကိုအသိဉာဏ် Proximity ဆီလီကွန်လက်ပတ်
စမတ်ခန္ဓာကိုယ်အပူတိုင်းမီတာလက်ကောက်, စမတ် ECG အပူချိန်လက်ကောက်